Unicode သုံးပြီးပြီလား။ စမ်းပြီးပြီလား ။- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
Unicode သုံးပြီးပြီလား။ စမ်းပြီးပြီလား ။
While I tried to convert my blog 's xml file from zawgyi to unicode, this following error message is formed . output file is produced but it already same with source file
MYSTERY ZILLION still not allow unicode until April နှစ်သစ်ကူး because when we change zawgyi to unicode , all of the unicode text will be gone. Don't use unicode in MZ forum , now.
နှစ်ကူးဆိုတာ .. ၂၀၁၁ english new year ကိုပြောတာမှတ်လို ့.. sorry ပါ ကိုစေတန်ရေ ..
myanmartutorials ရော myanmaritpro ရော က ၂၀၁၁ မှာစပြီး unicode ပြောင်းလိုက်တာဆိုတော့ နှစ်ကူးချင်းရောသွားလို ့... :biggrin:
ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုဒ်ကို စတင်ပြောင်းမဲ့သူတွေနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ ဖောင့်နာမည်၊ ကီးဘုတ်နာမည် တွေကဘာတွေလဲဗျ
NMH ကတော့ဇော်ဂျီနဲ့ လက်ကွက်တူတယ်လို့ဖတ်ရတယ် ဖောင့်ထဲကကျတော့ ဘယ်ဟာကိုရွေးရမှာလဲ
ရှေ့ကပိုစ့်တွေအကုန်ဖတ်ပီးတော့ မျက်စိတွေလည်သွားပီ ဖောင့်တွေလဲအများကြီးပဲ ကီးဘုတ်တွေလဲအများကြီး
ရောကုန်ပီ ဘယ်ဟာက စတင်အသုံးပြုသူနဲ့အဆင်ပြေမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်
- သင့် - ဆိုတာကိုရိုက်လို့မရဝူးဖြစ်နေတယ် အောက်ကမြင့် ရိုက်မရတာ ရေးချရိုက်ပီးမှ အောက်ကမြင့် ရိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ် - တော့ -
notepad ထဲမှာရေးပီးတော့ မှတ်တဲ့အခါမှာ UTF-8 နဲ့ပဲလား Unicode ဆိုတာနဲ့လား ဘယ်ဟာနဲ့မှတ်ရမလဲ
ရိုကျ​ရ​တာ သိပျ​မ​ဆငျ​မ​ပွေ​သေး​ဘးနောျ result နဲ့ ရိုကျ​နေ​တုနျး​မွငျ​ရ​တာ မ​တူ​ဘူး​ဖွစူျ​နေ​တာ​ဗြာ ဘယျ​လို​လုပျ​ရ​မှာ​လဲ ကူညီ​ပါ​အုံး -- - -
အပေါ်က စာကြောင်းကို NHM နဲ့ ရိုက်ထားတာ အဲလိုကြီးဖြစ်တာ zawgyi page ဖြစ်နေလို့လားဗျ မသိလို့မေးတာပါ
Myanmar3ကအဟောင်းဖြစ်နေလို့ပါ ၅.၁ ဖြစ်နေတယ် နောက်ဆုံးထုတ်ကိုအောက်ကလင့်ကနေယူပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ဖောင့်တွေလည်းအများကြီး ကီးဘုတ်တွေလည်း အများကြီးပါ သုံးချင်တာနဲ့သုံး အတူတူပါပဲ။
မှန်၏ ယူနီကုဒ်နဲ့ ရိုက်ထားတာကို ဇော်ဂျီနဲ့ဖွင့်ကြည့်ရင်တော့ ဒီလိုကြီးဖြစ်နေမှာပါ ဒါပေမယ့် ယူနီကုဒ်နဲ့ရေးထားတာကို တစ်ခြားယူနီကုဒ်ဖောင့်တွေနဲ့ကြည့်ပါ ဘယ်ဟာနဲ့ကြည့်ကြည့် အကုန်လုံးအတူတူပဲဖတ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် Yungkio unicode ကိုသုံးတာ ရိုက်လိုက်ရင် ဖတ်လို့ရပေမယ့် gtalk မှာချက်ရင်ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။
ZawGyi နဲ ့ရိုက်ထားတာတွေကိုရော ယူနီကုတ်သုံးထားတဲ့စက်မှာ ကြည့်လို ့ရလား။ Unicode သွင်းလိုက်ရင်ကော ZawGyi သုံးလို ့ရဦးမှာလား။
်font က unicode လိုက်နာတဲ့ font တွေမှန်သမျှ ဖတ်လို ့ရမှာပါ။ ဥပမာ time news roman နဲ ့ရေးတာကို arial နဲ ့ဖတ်လို ့ရသလိုမျိုးပေါ့ဗျာ။
သို ့သော် ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကြိုက်တာကတော့ ယွန်းချိုလေးပါ။
kiawtatzaw wrote: »
Unicode နဲ့ Gtalk သုံးချင်ရင် ဒီက Patch လေးကို တင်လိုက်ပါ။
Password က 123456 ပါ။ Antivirus က ဗိုင်းရပ်လို့ မှားယွင်းဖော်ပြတတ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်လုံးဝ လုံးဝမဟုတ်ပါကြောင်း။
bro .. လက်တွေ့စမ်းကြည့်မှဖြစ်မယ် ... ဗျ...
စမ်းကြည့်ပြီ အဆင်မပြေတာတွေကို မေးကြ ဖြေကြ လုပ်မှ ...
နောက်ဆုံး အဆင်အပြေဆုံး ကို တွေ့မှာပါ .....
ဇောျဂြီ​က​နေ ယူ​နီ​ကုဒျ​ကို စတငျ​ပွောငျး​မဲ့​သူ​တှေ​နဲ့​အဆငျ​ပွေ​မဲ့ ဖော​ငျ့​နာမညျ၊ ​ကီး​ဘုတျ​နာမညျ တှေ​က​ဘာ​တှေ​လဲ​ဗြ
NMH ကတော့​ဇောျဂြီ​နဲ့ လကျ​ကှကျ​တူ​တယျ​လို့​ဖတျ​ရ​တယျ ဖော​ငျ့​ထဲ​က​ကြ​တော့ ဘယျ​ဟာ​ကို​ရှေး​ရ​မှာ​လဲ
ရှေ့က​ပို​စျ့​တှေ​အကုနျ​ဖတျ​ပီး​တော့ မကြျစိ​တှေ​လညျ​သှား​ပီ ဖော​ငျ့​တှေ​လဲ​အမြား​ကွီး​ပဲ ​ကီး​ဘုတျ​တှေ​လဲ​အမြား​ကွီး
ရော​ကုနျ​ပီ ဘယျ​ဟာ​က စတငျ​အသုံးပွု​သူ​နဲ့​အဆငျ​ပွေ​မ​လဲဆို​တာ​သိ​ခငြျ​ပါ​တယျ
bro .. လ​က​်ေ​တွ့​စ​မ​်း​ြ​က​ည​့်​မှ​ြ​ဖစ်မ​ယ​် ... ဗျ...
စ​မ​်း​ြ​က​ည​့်ြ​ပီ အဆင်မေ​ြ​ပ​တာ​ေ​တွ​ကု​ိ ေ​မး​ြ​က ေြ​ဖ​ြ​က လုပ်မှ ...
ေ​နာက်ဆုံး အဆင်အေ​ြ​ပ​ဆုံး ကု​ိ ေ​တွ့​မှာ​ပါ .....
patch ကိုသွင်းပြီးသွားပြီ ဒါပေမယ့်မရဘူးဖြစ်နေတယ် .. ရိုက်လို ့တော့ရသွားပြီ .. ဒါပေမယ့် အထဲမှာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ် ..
ကိုလူပျိုကြီး ခင်ဗျ . စောစော က ပြောသလို ပဲ search engine မှာ unicode နဲ့ ရေးထား တာကို ပိုကောင်းစွာ ရှာနိုင် ဖော်ပြနိုင်သလိုပဲ . ကိုယ့် username ကို ဗမာလို unicode နဲ့ ရိုက်ပြီး သိမ်းတဲ့ အခါ .
ဥပမာ . လူပျိုကြီး ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ဘယ် လို ရိုက်ရေးရေး . သိမ်းတဲ့ စနစ် တူတဲ့ အတွက် ရှာ ပြီး တိုက် စစ်တဲ့ အခါ အဆင်ပိုပြေမယ် .
အဲဒါ ဟုတ်ပါသလား .
သေချာသိချင်လို့ မေးတာပါ .
ဟုတ်ပါတယ် အများအားဖြင့် Username တွေမှာ ဗမာလိုရေးထားရင် ရှာရအတော်ခက်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်မှာတော့ Storage Order ဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း သိမ်းတဲ့အတွက် အရင်ရိုက်တာ နောက်ရိုက်တာတွေ စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။ အောက်မှာပြထားတဲ့ စကားလုံးနှစ်လုံးဟာ မတူပါဘူး အမြင်အရတော့တူနေပါတယ်။ အဲဒါကို Notepad ထဲထည့်ပြီး လူပျိုကြီး ဆိုပြီးတော့ Find နဲ့ရှာကြည့်ပါ တူတာတစ်ခုပဲထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် Database ထဲမှာလည်းအတူတူပါပဲ SELECT * FROM User WHERE Name='လူပျိုကြီး' ဆိုတာနဲ့ SELECT * FROM User WHERE Name='လူပျိုကြီး' ဆိုတဲ့နှစ်ခုဟာ အတူတူအဖြေမထွက်နိုင်ပါဘူး။
မြင်ရတာတော့ GTalk Setting ထဲက Font ကို ယူနီကုဒ်ဖောင့် မပြောင်းရသေးတာဖြစ်မယ် ပေါ်နေတာတွေက ယူနီကုဒ် Render မမှန်တာမဟုတ်ဘူး ဇော်ဂျီနဲ့ပေါ်နေတာပါ။
Yunghkio ပြောင်းထားတယ် .. မပြောင်းရင်ရိုက်လို ့ကိုမရတာ ... ဘာမှားနေလဲမသိဘူး ..
ဟုတ်တယ်ဗျ setting ထဲမှာ မြန်မာ3 ဆိုတာလဲရွေးပီးပီ ရိုက်နေရင်းတော့အဆင်ပြေတယ်
အခုသုံးတဲ့ Bubble theme ကိုသုံးလို့မရပါဘူး။ Setting>>Appearance က Classic Picture ကိုပြောင်းသုံးက အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ှQues 1:အခုတော့ Ekaya 64bit ကိုတင်ထားပါတယ်။ Window7ပါ။ Notepad မှာရေးရင်တော့ အဆင်ပြေပေမယ့်...
Mozilla Firefox, Chrome, Gtalk စတဲ့ application တွေမှာ ရိုက်ရင်တော့ Myanmar3 က English လိုပဲပေါ်နေပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကို Tutorial လေး ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
Ques 2: Photoshop CS5 မှာတော့ သုံးလို ့ရပေမယ့် "နေကောင်းလား" လို ့ရေးရင် ပထမဦးဆုံး "ေ" ပျောက်သွားပြီး "နကောင်းလား" လို ့ပဲပေါ်ပါတယ်...
အဲ့လို ဟိုဆန်းတ၀ါးဒီဆန်းတ၀ါး ၀ါးသုံးမဲ့အစား zawgyi က ပိုကောင်းဘူးလား.. ဖိုရမ်ထည်း လာတဲ့နည်းပညာ ၀ါသနာပါတဲ့လူတောင် unicode စပြောင်းတော့နည်းနည်းမျက်စိလည်ကြတယ်.. သာမန်လူတွေ ဆို ပိုဆိုးတာပေါ့ . ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ငြိမ်နေတဲ့ zawgyi ကပိုသာသလိုပဲ.. ကျနော်တင်ဟုတ်ဘူး enduser တိုင်းကိုမေးကြည့် zawgyi နဲ့ myanmar3 ဘယ်ကကြိုက်လည်းဆိုရင် zawgyi ပဲကြိုက်မှာ..
ကျနော်ကတော့စိတ်ကူးထားတာ zawgyi သုံးတဲ့ဆိုဒ်တွေ ပဲရှာဖတ်မယ်.. :P
February 2011 edited February 2011 Registered Users, Moderators
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Unicode ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ဘယ်လို အကြိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သာမာန် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သုံးလို့ရဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ခရေစေ့တွင်းကျ Unicode Consortium, Logical Order စသည့် ဘာညာ သာလကာတွေ သိဖို့ မလိုပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့လည်း အဲ့သလောက် ကြီးသိဖို့ ကြိုစားကြမယ်လို့မထင်ပါဘူး။
Cyber Cafe တွေအနေနဲ့လည်း အများနဲ့ ဆက်ဆံပြီး စီးပွားရေးလုပ်ရတာပါ။ Myanmar Unicode ကို Support လုပ်တာပဲဖြစ်စေ၊ Zawgyi ကို Support လုပ်တာပဲ ဖြစ်စေ ဘယ် font, ဘယ် keyboard layout ကိုပဲသုံးသုံး အသုံးများတဲ့ Keyboard ကိုသာ တင်ထားကြမှာပါပဲ။
အကယ်၍ သင်က Myanmar3ကော Zawgyi ကော သင့်ရဲ့ Cyber မှာ တင်ပေးထားမယ်ဆိုရင် Myanmar3 မှာတောင် ဒီလောက် Keyman, NHM , အက္ခရာ ဆိုတာတွေများနေတာ ကွန်ပျူတာ တစ်ခုလုံး ရှုပ်ယှက်ခက်ကုန်မှာပေါ့။
Cyber တွေကတော့ ရှင်းပါတယ် သုံးချင်တဲ့သူက သုံးချင်တဲ့ font ကိုသုံးပါ။ လိုအပ်ရင် လှမ်းခေါ်လိုက် လိုချင်တဲ့ font / keyboard ကိုထည့်ပေးမယ်။ ဒါပဲလေ။ Cyber တော်တော်များများကလည်း မြန်မာ့နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ရည်မှန်းပြီး Cyber Cafe ဖွင့်ကြတယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။ ခောတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ အညီစီးပွားရေးလုပ်ကြတာတွေပါ။ လက်ရှိ Myanmar Unicode နဲ့ပက်သက်ပြီး လိုအပ်ရင် Unicode ဆိုတာ ဘာလဲ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ ရှင်းပေးယုံကလွဲလို့ အခြား Promote မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
Zawgyi က Community တောင့်တယ်ဘာညာဆိုတာ ကျွန်တော်မပြောလိုပါဘူး။
2005 ခုနှစ်လောက်က စ၍ မြန်မာစာနဲ့ ပက်သက်ပြီး Programming မလုပ်တာကြာပါပြီး၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာစာနဲ့ပက်သက်ပြီး မကျေညက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုတစ်လောက MZ edu က article လေးတွေကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် အားလုံးကို Record လုပ်ချင်တာနဲ့ Program တစ်ခုရေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြသနာပေါ်တာက Rich Text Box မှာပါ။ ပြဿနာကို Myanmar Language ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ရေးထားပါတယ်။
အခု Myanmar Language ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ 29,Jan က C#, C++, .Net တွေရဲ့ Rich Text Box မှာ မြန်မာသရီးဖောင့်ကို သုံးတဲ့အခါ မလိုအပ်တဲ့ စာလုံးတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးကွာခြားမှုတွေ များလွန်းနေတယ်။ ဒီအတွက် သာမာန် Text Box လိုပဲ တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး မကွာခြားအောင် လုပ်လို့ရပါသလား?။ နည်းလမ်းတစ်ခုခုရှိရင် ပြောပြကြပါ။ သို့မဟုတ်ရင်လည်း ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြကြပါဦး။ ဆိုပြီး wall မှာ တင်ထားပါတယ်။ ဖြေမယ့်သူမရှိပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် official site မှာပဲ ဖြေကြားပေးတာလား။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမှု လက်တလောတော့ Zawgyi ကို လက်လွတ်လို့မရသေးပါဘူး။ Zawgyi ကော Myanmar3 ကောသုံးနေရတာပါပဲ။ NHM နဲ့ Myanmar3 ကိုသုံးတဲ့အခါ အချို့ ပြဿနာလေးတွေရှိတယ်။ VS2010 မှာပါပဲ။ ဟိုးတလောကတော့ မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Myanmar Language ရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ပြန်မဖြေတော့ အားလျော့မိတာတော့ အမှန်ပဲ။
patch သွင်းပြီး ၁ရက် ၂ရက်နေတော့ သူဖာသာသူရသွားတယ် ... ဘာလို ့လဲတော့မသိဘူး ...
ဒါပေမယ့် ဘာ font ပြောင်းပြောင်း zawgyi နဲ ့ရေးထားတာတွေမမြင်ရတော့ဘူး ..
unicode ရော zawgyi ပါ နှစ်ခု လုံးမြင်ရအောင်လုပ်လို ့မရဘူးလား ...
IT သမား တွေက unicode ပြောင်းကြပေမယ့် ... တခြား IT field ကမဟုတ်တဲ့လူတွေက unicode ဆိုတာဘာလဲတောင်မသိတဲ့လူတွေအများကြီးပါ ..
အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုတော့ နှစ်ခုလုံးခွသုံးနေရမယ့် အခြေအနေဖြစ်နေတယ် ..
á€€á€­á€¯á€‡á€„á€¹ wrote: »
I don't know question 1.
Q2: can you try with Yunghkio ? Yunghkio is best in photoshop Mac version. It's working fine on my Mac. But I don't know in Windows Photoshop
Myanmar Language ရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ပြန်မဖြေတော့ အားလျော့မိတာတော့ အမှန်ပဲ။
You should tag some people in your photos. I added tag in your photo
အက္ခရာက 32 bits Keyboard ဟာ 32 bits Application တွေအတွက်သုံးရပါတယ် Notepad က 64 Bits ဖြစ်နေလို့ 64 Bits Keyboard နဲ့ရိုက်လို့ရတာပါ။ အဲဒါကြောင့် အက္ခရာကို 32 Bits Keyboard ပါတင်ထားမှ 32 Bits Application တွေအတွက် ရိုက်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ Windows က 64 Bits ဖြစ်ပေမယ့် အခြားအသုံးများတဲ့ Browser လိုဟာတွေက 32 ပဲရှိနေပါသေးတယ် အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နေတာပါ။
try with parallel universe from
ဟုတ်ဘူး .. gtalk မှာပြောတာ ...
သူများမေးမှာ စမ်းကြည့်တော့ရဘူး ...
Window မှာ Yunghkio နဲ ့လဲမရဘူး .. အဓိကဖြစ်တာက ဗျည်းမလာခင်အရင်ရိုက်ရတဲ့ သေ၀ထိုး နဲ ့ယရစ် ကဖြစ်တာ .. ဘယ်ဟာအရင်ရိုက်ရိုက် ဗျည်းပဲရှေ့ရောက်နေတယ် ...
မရမက လုပ်ချင်ရင်တစ်ခုတော့လုပ်လို ့ရတယ် ... ဗျည်းတွဲ တို ့သရ တို ့မှာ စက်၀ိုင်းမပါတဲ့ font (mm3web) လိုမျိုးဟာနဲ ့လုပ်ရင်ရတယ် ... ကလေးတော့ဆန်တယ် ...
နေကောင်းလားရိုက်မယ်ထားပါတော့ .. သေ၀ထိုးနဲ ့ဗျည်းကြားထဲမှာ space လေးအရင်ခြားပြီး ..ေနေကာင်း လို ့အရင်ရိုက်ပြီးမှ .. space လေးတွေလိုက်ဖျက်လိုက်ရင်တော့ရတယ် .. ဟဲ ဟဲ ...
ဘာဖြစ်တာလဲသိဘူး ... အော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် .. character map ကကူးရင် mm3web နဲ ့ဆို ရတယ် ..
Yunghkio နဲ ့myanmar3 ဆို ပုံထဲက with spacing ဆိုတာနဲ ့တူတူပဲ .. ရှေ့ဆုံးက သေ၀ထိုးက .. စက်၀ိုင်းပေါ်နေတယ် ...
unicode နဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့ ဘယ်လိုကွာပါသလဲရှင့် ညီမက MZ ကိုသုံးတာ နည်းနည်းကြာပြီဆိုပေမဲ့ သေချာနားမည်သေးပါဘူး MZ မှာ unicode အကြောင်းသေချာရေးထားတာများရှိလားရှင့် ကိုယ်တခုခု ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုရှာရပါမလဲ unicode အကြောင်းသေသေချာချာသိချင်ပါတယ် အခုညီမမေးတဲ့မေးခွန်းက ဖြေပြီးသားဆိုရင် ရှာပုံရှာနည်းလေး လမ်းညွှန်ပေးပါနော် thanksalot
ကျွန်တော် ဒီ article မှာ page 1 to9ထိ် အမေးတွေရော အဖြေတွေရော အကုန်ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ သိချင်တာလေးကို မသိလိုက်ရဘူး။ မေးထားတာတော့ တွေ့လိုက်တယ်။ ပြန်ဖြေထားတာ မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ mm unicode ကို g talk မှာ သုံးရင် စာလုံးတွေ ခြားနေတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ပါသလဲ မသိဘူး။ mm unicode ဟာ ထင်သလောက် မပြည့်စုံသေးတာ တွေ့ရတယ်။ computer မှာ folder icon name တွေမှာmm unicode ရေးထားခဲ့တဲ့အခါမှာ icon name ကို zawgyi ပြောင်းထားရင် မမြင်နိုင်ဘူး။ unicode ပြောင်းလိုက်ပြန်ရင် zawgyi က မမြင်တော့ ပြန်ဘူး။ အခုဟာက ဟိုပက်လိုက်ရမလို့ ဒီဖက်လိုက်ရမလို့ ကြားထဲမှာ ကန့်လန်ကြီး ယတ်ကန်ယတ်ကန်ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ထွက်လာသမျှ keyboard တွေကလည်းဆုံတော့ cyber သမားတွေ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုတင်မလဲတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်အလိုဆိုရင်တော့ တစ်ခုကိုပဲ ကောင်းကော်ငးမွန်မွန်ဖြစ်အောင် မွန်းမံစေချင်တယ်။
gtalk မှာ myanmar သုံးရင် zawgyi သုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့ ??? zawgyi သုံးရင်လဲ myanmar သုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့ ??? ရူးချင်လာပြီ...ဒါပေမယ့် ကောင်းသော အပြောင်းအလဲဆိုရင်တော့ ကြိုဆိုပါတယ်...
thetnaung87 wrote: »
mm unicode ကို g talk မှာ သုံးရင် စာလုံးတွေ ခြားနေတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ပါသလဲ မသိဘူး။ mm unicode ဟာ ထင်သလောက် မပြည့်စုံသေးတာ တွေ့ရတယ်။
GTalk မှာကောင်းကောင်းမပေါ်တာက Unicode ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး GTalk ထွက်ခဲ့တာကကြာပါပြီ အဲဒါကြောင့်သူ့အထဲက Text Library တွေကဟောင်းနေလို့ Randering ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တာပါ အဲဒီတော့ မူရင် GTalk မှာ Support လုပ်ဖို့ကတော့ Google က GTalk Version အသစ်ထုတ်မှပဲ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် GTalk ကို Crack လုပ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုတော့ရှိတယ် အဲဒါကအပေါ်မှာ ကိုယောင်စိန်ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို Crack လုပ်ထားတာ မသုံးချင်ရင်တော့ Pidgin လို Messanger ကိုအစားထိုးသုံးပါ GTalk ကို Pidgin မှာသုံးလို့ရတာပါပဲ ကြိုက်တဲ့ဖောင့်ပြောင်းပါ သုံးလို့ရပါတယ်။
computer မှာ folder icon name တွေမှာmm unicode ရေးထားခဲ့တဲ့အခါမှာ icon name ကို zawgyi ပြောင်းထားရင် မမြင်နိုင်ဘူး။ unicode ပြောင်းလိုက်ပြန်ရင် zawgyi က မမြင်တော့ ပြန်ဘူး။
ဒါကတော့ ဘယ်လိုမှ ဖြည့်ဆည်းပေးလို့မရနိုင်တဲ့ Requirement ပါ System fonts ကိုပြောင်းပေးတယ် icon name ဆိုတာက rich text မဟုတ်ပါဘူး အရင်လည်း စာလုံးကို အင်္ဂလိပ်လိုလည်း ဖောင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ရေးလို့မရပါ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Encoding မတူတဲ့အတွက် ပြောင်းလည်း ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ်က Encoding မတူတဲ့အတွက် icon name ကို ဘာနဲ့ရေးရေးဖတ်လို့ရဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်တစ်ခုပဲရွေးပါ။
ထွက်လာသမျှ keyboard တွေကလည်းဆုံတော့ cyber သမားတွေ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုတင်မလဲတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်အလိုဆိုရင်တော့ တစ်ခုကိုပဲ ကောင်းကော်ငးမွန်မွန်ဖြစ်အောင် မွန်းမံစေချင်တယ်။
ကီးဘုတ်တွေက သိပ်မများပါဘူး ဒါကလည်းလိုအပ်ချက်အရ ထုတ်ပေးတာမဟုတ်လား တကယ်က NHM လိုဟာက ဇော်ဂျီရိုက်နေကျလူတွေအတွက် တောင်းဆိုလို့လုပ်ပေးထားတာပါ တကယ်တော့ ယူနီကုဒ်ကီးဘုတ်တစ်ခုပဲဆိုရင် အဲဒါကိုထုတ်ဖို့ဘယ်သူမှ မစဉ်းစားကြပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကီးနေရာတွေပုတ်သွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ NHM, Myamar3, Ekaya ဒါပဲရှိတာပါ လက်ကွက်ကလည်း NHM က ဇော်ဂျီလက်ကွက် Myanmar3 ကသူ့ရဲ့လက်ကွက်ရှိတယ် Ekaya ကဝင်းလက်ကွက်နဲ့တူတယ် အဲဒီတော့ အသုံးများတဲ့လက်ကွက်တွေကို Support လုပ်ပေးထားတာပါ။
ဘာ font တွေထည့်ပြီး ဘာ software တွေ install လုပ်ရမလဲ တချက်လောက်ပြောပြပေးပါလား..ကျွန်တော်က Cyber Cafe ဆိုင်ဆိုတော့ အကုန်ထည့်ပေးထားရမှာမိုလို့ပါ...ကျွန်တော်လဲ ဒီဆိုဒ်ကို နေ့တိုင်း၀င်ကြည့်နေတော့ install လုပ်ရတော့မှာပေါ့ဗျာ...ပြီးတော့ zawgyi unicode နဲ့နေရာ conflict ဖြစ်နိုင်သလား...ပြီးတော့ အဲဒါတွေ အကုန် download လုပ်လို့ရမဲ့ လင့်လေးတချက်လောက် ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါလား...
Unicode Fonts ထဲမှာတော့ ယွန်းချို က တော်တော်လေးလှပါတယ်။ MMTutorials မှာသုံးထားတယ်ထင်ပါတယ်။ Download လုပ်ချင်ရင်တော့.
ဒါကတော့ Winmyanmar Keyboard ပါ။ Zawgyi လို Ctrl+Shift မဟုတ်ပဲ F9 နဲ့ Eng ~ MM ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
Conflict ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ နည်းနည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ browser setting ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ browser setting ကို အောက်က link က ပြထားတဲ့ အတိုင်းသာ လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တစ်ခု လုံး၀နားမလည်တော့လို့။ ယူနီကုတ်လက်ကွက်တွေက အများကြီးဘဲ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်တင် Myanmar3, NHM, Eakya နောက်ပြီး Win တို့ ဘာတို့လည်းရှိတယ်။
လက်ကွက်တစ်ခု ဖောင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော် Myanmar3 keyboard ကို NPL Research Center Website ကနေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ MS Word မှာ စာရိုက်ကြည့်တယ်။ Myanmar3 ဖောင့်တစ်ခုဘဲ အလုပ်လုပ်သလိုဘဲ Yunghkio font ကတော့ ရိုက်လို့မရဘူး၊ ဖတ်လို့တော့ရတယ်။
အဲဒါ လက်ကွက်တစ်ခုနဲ့ ယူနီကုတ်ဖောင့်အားလုံး ရိုက်လို့မရနိုင်ဘူးလား။ ဘယ်ယူနီကုတ် လက်ကွက်ကို သုံးရင် ကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မလည်း အလွယ်လမ်းဘက်ကမဟုတ်ဘဲ၊ ရေရှည်အနေနဲ့ပေါ့။ ဇော်ဂျီနဲ့ မတူတာက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး တစ်ကယ်အားလုံးစံအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်ရင် ခဏတော့ အခက်အခဲရှိပေမယ့် ရေရှည်တော့ အသားကျသွားမှာပါ။ ခုက ယူနီကုတ်လက်ကွက်အမျိုးမျိုးဆိုတော့ ဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်ရမယ်၊ ဘယ်ဟာက ယူနီကုတ်ဖောင့်အမျိုးမျိုးကို ရိုက်လို့ရမလည်း သိရင် နည်းနည်းအကြံလေးပေးပေးပါဦးခင်ဗျာ ...
တကယ် standard ဖြစ်မဲ့ unicode ကို website အားလုံးက သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ဇော်ဂျီကတော့ ဘာပဲပြောပြော ယူနီကုတ် မဖြစ်ပေမယ့် တကယ်အဆင်ပြေတာကတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ယူနီကုတ်သာ တကယ်အားလုံးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေကလည်း အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားကြမှာပါ။ ခက်တာကတော့ လက်ကွက် ပြန်ကျင့်ရတော့မယ်။ အဲဒီယူနီကုတ်က ဖုန်းတွေမှာကော အဆင်ပြေပါ့မလား။ ဖုန်းအားလုံးအတွက်ကို ပြောတာပါ။